IiNgcaciso zoRhwebo-Funda ukuRhweba
Uniswap (UNIUSD) Ixabiso: Ukunyuka koxinzelelo lweeBhere kunokuthoba ixabiso ukuya kwiNqanaba le-6 yeedola
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap - Januwari 27 Kwimeko apho iibhere zikwazi ukwenza uxinzelelo lokudiliza inqanaba lenkxaso ye-10 yeedola, ixabiso lingancipha kwinqanaba lenkxaso kwi-6 kunye ne-4 yeedola. Ukungaphumeleli ukwaphula inqanaba le-10 leedola ngeebhere, ixabiso le-Uniswap linokwenyuka liye kwi-12 yeedola, i-$ 14 kunye nexabiso le-$ 16 [...]
I-FTSE I-100 Faces Rejection kwiNqanaba le-7500, ukuthengisa uxinzelelo kunokwenzeka
Inqanaba lokuchasa: 7500, 7600, 7700Nqanaba leNkxaso: 7300, 7200, 7100 FTSE 100 (UKX) Ixesha elide I-Trend: BearishFTSE 100 (UKX) ikwi-downtrend kodwa ithetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa lunokwenzeka. Okwangoku, i-UKX ingaphezulu kwe-50-day SMA kodwa ingaphantsi kwe-21-day SMA. Oku kuthetha ukuba isalathiso kunokwenzeka ukuba sibotshelelwe phakathi kwentshukumo […]
NgoLwesithathu, nge-26 kaJanuwari 2022
I-Etherem ilula ukuya kwi-2,160 i-Altcoin iphinde yahlulele i-Ethereum E-Outter) Ithamsanqa le-STEARSSTHE: $ 2,628.95, $ 313,075,983,129 yeedola, $ 18,479,573,972 ye-EThereum (Eth) NgoJanuwari 4,000, 4,500 Ngomhla wama-5,000 kaJanuwari, ixabiso le-Ethereum (ETH) lehle laya kutsho kwi-3,500 yeedola kodwa lisenokuqalisa ukunyuka. I […]
I-US Wall Street i-30 iphinda ibuyise i-Bullish Momentum, i-Battles Resistance kwiNqanaba le-35000
Iindawo eziphambili zokuChasa: 35000, 35500, 36000Imimandla yeNkxaso ePhambili: 27000, 26500, 26000 US Wall Street 30 (US30USD) Ixesha elide iTrend: BearishUS30USD iye yachacha ukusuka kwi-downtrend yangaphambili kodwa i-35000 ye-downtrend kwinqanaba likaJanuwari24 inqanaba lokuxhathisa kwi-33150.40 kaJanuwari. ukuya kwinqanaba 30 kwaye watsalwa umva. I-USXNUMXUSD ikwinyathelo eliya phezulu kwaye irhweba kwinqanaba […]
Isitalato iUS Wall 30
Iibhere ze-USDCAD zifuna ukuHlangulwa ngokulandela iNtshukumo yeNtshukumo yabaThengi
Uhlalutyo lwexabiso le-USDCAD - NgoJanuwari 26 USDCAD iibhere zifuna ukuhlengwa ngokulandela ukunyakaza kwempembelelo yabathengi ukusuka kwinqanaba elibalulekileyo le-1.24810. Utyekelo lwamaxabiso emarikeni luchazwa ngokubanzi ngokucinezelwa kweenkunzi zenkomo kunye neebhere kumanqanaba abalulekileyo empembelelo. Idabi lempembelelo liye labonakala kakhulu kwisenzo samaxabiso emarike. […]
Funda iiNdaba zoRhwebo ngeeNdaba kunye neQhinga
Yonke into oyifunayo kwiNkonzo yeendaba zeFX
Ukuba unamava kwaphela kwiimarike zezemali, uyazi ukuba zininzi iinkonzo zeendaba ze-forex ezikhoyo kwi-Intanethi. Uninzi lubonelela ngohlaziyo oluncomekayo kunye nezihloko ezithandekayo, ngelixa ezinye zisekwe kubhaliso. Kuxhomekeka kwiimfuno zakho, uninzi lwezi ndlela zinokuba zezinye ezinokwenzeka, ewe, ayizizo zonke iinkonzo ezenziwa zilingana. Ukufunda kweendaba ezi-2 zokutya zorhwebo yindawo eyahlukileyo yazo zonke izinto ezijamelene nemali, ii-CFDs, ikamva kunye ne-cryptocurrensets. Nokuba uthengisa ioyile ekrwada okanye iiYuro, izinto ezibalulekileyo zolu suku ziya kuqwalaselwa kakuhle, ngexesha elifanelekileyo. Eyona nto ilunge kakhulu, le nkonzo yeendaba yeFX ayi-100% yasimahla. Ukukwazi ukufunda phakathi kwemigca yinxalenye enkulu yokuba ngumrhwebi ophumeleleyo. Ngaphandle komxholo ofanelekileyo, ifuthe elinokubakho lokuthengisa kwintengiso yeendaba ezaphukileyo okanye umcimbi wezoqoqosho ocwangcisiweyo unokubonakala ngathi uyimfihlakalo. Ukuqonda lo msitho, zeziphi iimakethi ezichaphazelekayo, kunye nendlela yokwenza inzuzo kwizenzo zizakhono ezivela kwiminyaka yamava. Kulapho iqela le-Learn 2 Trade lingena khona-banolwazi lokwazi ukuba zeziphi izinto zeendaba ezihambisa imarike, kwaye yingxolo nje.
Zonke izinto Iindaba ze-Forex, iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezi-5 ngeveki
Ukunyuka kwendawo yentengiso yedijithali kwenze ukurhweba okusebenzayo kufutshane neeyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezi-5 ngeveki. Njengoko intetho endala isithi, "imali ayilali." Xa kuziwa kurhwebo lwangoku olusebenzayo, amagama e-truer kunzima ukuwafumana. Nokuba ungumrhwebi eAsia, Middle East, Yurophu, okanye eUnited States, umdlalo uyaqhubeka kwaye ithuba liqala. Impembelelo enokuthi ibali leendaba elibalulekileyo libe nayo kwiimarike zinkulu. Ngelishwa, iindaba ze-forex azikhawulelwanga kwiiyure zethu zokuvuka. Ngaba ngekhe kubemnandi ukwazi ukuba kuzakwenzeka ntoni xa ungekho kwiscreen sokurhweba kwaye ziya kuchaphazeleka njani iindawo zakho ezivulekileyo? Sukujonga ngaphaya kokuFunda ukutya kweendaba ezi-2. Ngabahlalutyi abagubungela iAsia-Pacific, iYurophu, kunye neeseshoni zokurhweba zase-US, ngekhe uphume ngaphandle xa usiza kwiindaba zeFX. Ukusuka eNew York ukuya eLondon ukuya eTokyo, abahlalutyi bethu bakwiwotshi, bezaphula iimarike ngexesha langempela. Ukuba iwotshi yealam ayikhange ihambe kwaye ufike emva kwexesha emarikeni, akukho zinkxalabo- uphononongo olukhawulezileyo lweZifundo 2 zeendaba zoRhwebo ziya kukubuyisela kumjikelo wokhuphiswano okhokelayo ngaphandle kwexesha.
Ukuhlaziywa kokugqibela: NgoJanuwari 16th, 2020